Busbar Feer Xiirashada, Mashiinka Laabaya, Milling Machine - Gaoji
GJCNC-BP-50 waa qalab xirfadle ah oo loogu talagalay in lagu farsameeyo busbar si hufan oo sax ah.
mashiinka shaqadaada si ay kaaga caawiso inaad maalgeliso iibsiga soo saara faa'iidooyinka muuqda.
Faahfaahinta alaabada GJCNC -...
Faahfaahinta alaabta ...
Hawlaha ugu muhiimsan iyo Featu ...
Faahfaahinta alaabta BM ...
Maajo / 15/2021
Si loo hubiyo in qof walbaa uu heli doono farxad damaanad qaad ah Iiddii guga, injineeradeennu waxay si adag u shaqeynayaan laba toddobaad, taas oo hubinaysa inaan haysanno badeecad nagu filan iyo qayb dayactir ah xilliga wax soo iibsiga kadib dabaaldegga Guga. ...
Wararka Gaoji ee usbuuca 20210126
Maajo / 11/2021
Tan iyo markii aan helnay fasaxii Guga Shiinaha ee Fasaxa Febraayo, shaqada waax kasta waxay noqotay mid ka xasilloon sidii hore. 1. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaan dhammeynay in ka badan 70 dalab iibsi. Ku dar: 54 cutub ...
Shirweynihii 7-aad ee Ganacsiga-Pak-Shiinaha
Maajo / 10/2021
Hindisaha Shiinaha ee loo yaqaan 'One Belt One Road', oo loogu talagalay in lagu soo nooleeyo waddadii qadiimiga ahayd ee Silk Road, ayaa horseeday isbeddelo siyaasadeed oo lagu sameeyo waddamada Bartamaha iyo Bariga Yurub. iyada oo ah mashruuc muhiim ah, China-Pakistan Economic Corr ...
Carwadii 12-aad ee Shanghai International Electric And Electrician Exhibition
Waxaa la aasaasay 1986, EP waxaa soo qabanqaabiyay Golaha Korontada ee Shiinaha, Shirkadda Shirkadda 'Grid Corporation' ee Shiinaha iyo Shiinaha Korantada Korantada ee Shiinaha, oo ay wada-abaabuleen Shirkadda 'Adsale Exhibition Services Ltd', oo ay si buuxda u taageereen dhammaan Awoodda waaweyn ...
Sannadkii 2020, shirkadeennu waxay xiriir qoto dheer la yeelatay shirkado fara badan oo heer caalami ah oo heer caalami ah iyo kuwo ajnabi ah, waxayna dhammaystireen horumarintii la habeeyay, rakibidda iyo hawlgelinta tiro badan oo ka mid ah qalabka UHV. Daqo Group Co., LTD., Oo la aasaasay 1965, ayaa ...